Abafundi basolwa ngokubulala uzakwabo ngeMandela Day | News24
Abafundi basolwa ngokubulala uzakwabo ngeMandela Day
Bloemfontein – Abafundi ababili basaseCentral University of Technology bavele eNkantolo yeMantshi yaseBloemfontein ngecala lokubulala omunye uzakwabo.
“Lo mfundi washaywa kanzima ngezinduku yegalofu waphinde wagwazwa waze washona egunjini lakhe ebhilidini abehlala kule emgwaqweni uParfitt ngoMgqibelo ebusuku ngomhlaka 18 ku-Julayi,” kusho okhulumela amaphoyisa uCaptain Chaka Marope wasesiteshini samaphoyisa iParkweg.
Abasolwa u-Okene Douglasa oneminyaka engu-21 ubudala noTebello Tsubella onengu-22 ubudala bobabili abadabuka eNigeria bangabafundi kusona lesi sikhungo esizinze eBloemfontein.
Omunye wabo ubengumngani osondelene nomufi, kusho uMarope.
Kubikwa ukuthi laba baphinde bathatha isidumbu sikamufi bayosishisa ngaphambi kokuthi bayosilaxaza eduze kukajantshi wesitimela e-Uitsig.
Isidumbu salo mfundi oneminyaka engu-25 ubudala obenza unyaka wesibili wezifundo zobunjiniyela satholwa ngoMsombuluko olandelayo ngumshayeli wemoto owabe ezidlulela wabikela amaphoyisa.
OLUNYE UDABA:Kudutshulwe abagibeli kwesodlame lwamatekisi eGoli
“Lo mfundi owashona waphinde wantshontshelwa izimpahla zakhe ezahlukene okubalwa kuzo, umabonakude, umakhalekhukhwini wohlobo lwe-iPhone, izimpahla zokugqoka nemali.
Abasolwa baphinde bantshontsha nemoto kamufi bayisebenzisa ukuyojuxuza ngayo ngempelasonto okwabe kugunjwa ngayo iMandela Day.
Le moto yathola ilaxaziwa emgwaqweni osondelene nesikhungo,” kuchaza uMarope.
Abasolwa babanjwa ngemuva kwezinsuku ezine endaweni abahlala kuyo ngemuva kophenyo lwamaphoyisa.
Inkantolo ilihlehlisele umhlaka 3 leli cala kanti abasolwa bazoqhubeka nokubhadla ezikhindini.